Ms. Hammurabi ( 2018 ) - Myanmar Asian TV
ဥပဒေရေးရာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး နေ့စဉ်လာနေမှုဘဝတွေကို လက်တွေ့ကျကျ မီးမောင်းထိုးပြမဲ့ Ongoing Serie လေးတစ်ခု မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်
ဒီSerieလေးဟာဆိုရင် အပတ်စဉ် တနင်္လာနဲ့ အင်္ဂါနေ့တွေမှာ JTBC ရုပ်သံလိုင်းကနေ ကိုရီးယားစံတော်ချိန် ၁၁နာရီမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသမဲ့ Legal drama လေးဖြစ်ပါတယ်…..
အပိုင်း ၁၆ပိုင်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး
screenwriter က ဆိုးလ်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးက တရားသူကြီးချုပ် Moon Yoo Seok ဖြစ်ပြီး သူ့ဝတ္တု “Miss Hamurabi ” ကိုပဲ အခြေခံပြီး ဇာတ်ညွှန်းပြန်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်…..
မျက်စိဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မင်းသမီးချောလေးGo Ara ( Black, You are all surrounded)
Infinite Lလို့နာမည်ကြီးတဲ့ ပျိုမေတို့ အသည်းစွဲ အဆိုတော်မင်းသားချောလေး Kim Myung Soo ( Ruler:Master of the mask)
ဟာသ ၊ လူဆိုး ၊ ဘယ်ဇာတ်ရိုက်မဆို ပိုင်နိုင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်ကြီး Sung Dong Ii (Legend of blue Sea ထဲက လူဆိုးကြီး)
ဒီ drama လေးက မတူညီတဲ့ တရားသူကြီး ၃ယောက်အကြောင်းဖြစ်ပြီး
နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာ မည်သူ့မှာမဆို ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးတွေကို အဓိကထားရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်…..
စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်တဲ့စိတ်ဝါဒဆန်တဲ့တရားသူကြီးအသစ်လေး ပတ်ချာအို့ရွမ်း (Go Ara)
သူကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနောက်မျက်စိမှတ်လိုက်နာတာထက်ကိုဓဥပဒေကို လက်ကိုင်ထားပြီး (မျက်လုံးတစ်လုံးဆို မျက်လုံးတစ်လုံး) ၊
အပြစ်ကြီးရင် ကြီးသလို ၊ အပြစ်ပေါ့ရင် ပေါ့သလို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ဖို့ စိတ်ကူးသူ
အနေအေးပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်း (စာအုပ်ကြီးအတိုင်း) တသဝေမတိမ်းလုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ တရားသူကြီး အင်ဘာရွန်း (Infinite L)
သုံးယောက်ထဲမှာ ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ် အတွေ့ကြုံလည်းရှိပြီး လက်တွေ့ဆန်တဲ့ အကြီးတန်းတရားသူကြီးမင်း ဟန်ဆယ်ဆန်း ( Sung Dong Ii)
ကျောင်းသားဘဝ အတန်းဖော်တွေကနေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအဖြစ် ပြန်တွေ့ကြတဲ့အခါမှာ…..
အဲ့ခြားနားမှုတွေကနေ တဖြည်းဖြည်း ဘယ်လို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ တရားစီရင်မှုတွေကို အထောက်ကူဖြစ်စေမလဲ
သူတို့ ၂ဦးလည်း တရားစီရင်မှုတွေ ၊ အတွေ့ကြုံတွေကနေ ဘယ်လို လူပီသလာကြမလဲ….
တရားသူကြီး ၃ယောက် ဘယ်လို တရားခွင်တွေနဲ့ကြုံရပြီး ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာအပြင်
Go Araနဲ့ Infinite L ရဲ့ အတွဲညီညီနဲ့ ငြီးငွေ့ဖွယ်မကောင်းဘဲ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင် ဘယ်လိုတွေ သရုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာတော့ screen ပေါ်မှာ ဆက်လက်ရှုစားကြပါရှင်……..
Reviewed by May Zun Aung
Translated by May Zun Aung &May Thinzar Myint,HMN & May Sit Min
Final Episode 16 : Openload Final Episode 16 : SolidDrive
Starring: Cha Soo-yeon, Go Ara, Kim Young-ok, Ko In-Beom, L, Lee Cheol-min, Lee Elijah, Lee Tae-sung, Lee Won-Jong, Ryu Deok Hwan, Sung Dong-il,